Ungayilungisa Kanjani i-iPhone Ngeke ivuleke? - Ungakwenza Kanjani
Ingabe unenkinga yokuvula i-iPhone yakho? Ungakhathazeki! Lapha uzothola izixazululo kuzo zonke izinkinga ezihlobene namandla nezinye izinkinga ezifanayo ze-iPhone. Sizozama ukunaba ngezinkinga ezahlukahlukene, ngisho namagatsha, ukukusiza ngendlela ephelele, ngakho-ke ake sibheke.
Lungisa i-iPhone ngeke ivule - Izindlela ezinhlanu ezingenzeka
1. Qala kabusha ifoni yakho
Ake siqale ngokuzama ukuqala kabusha ifoni yakho. Ngalokhu, ungahle uthande ukucindezela inkinobho yamandla. Bheka ukuze ubone ukuthi ngabe kubhekekile yini lokho. Ungacindezela isikhathi eside inkinobho yasekhaya noma inkinobho yamandla uma une-iPhone endala.Uma lokho kungasebenzi, bese ucindezela ukhiye nenkinobho eseceleni ndawonye ukuze ifoni ivuselele inketho yamandla.
Isikhathi esiningi, uma kube khona inkinga ethile elenga noma yesoftware, lokhu kuzoyixazulula. Kungenzeka noma nini ngokungazelelwe. Ezinye izinhlelo zokusebenza noma izinqubo kungenzeka bekuphazamisa ukusebenza kwe-iPhone yakho.Kodwa-ke, uma lokhu kungasebenzi, bese ubheka inketho elandelayo.
2. Qinisekisa Ukuthi Akukhokhwanga
Uma ungayisebenzisanga ifoni yakho isikhashana, kungenzeka ukuthi ibhethri likhishwe. Kungenzeka kwenzeke ngobusuku obubodwa noma ngenkathi uphumile uzijabulisa nabangane bakho. Ngakho-ke, isinyathelo sokuqala kungaba ukuyixhuma ngekhebula lamandla. Sebenzisa leyo eza ne-iPhone yakho futhi uma ngabe ubambele, qiniseka ukuthi isebenza kahle.
Uma ungakatholi mpendulo, zama ikhebuli ehlukile. Uma ungenayo ikhebuli ehlukile, iya esitolo ukuze uzame entsha noma usebenzise ikhebuli ye-Mac yakho. Kufanele uqiniseke ukuthi ikhebuli iyahambisana nefoni. Shaya echwebeni lokushaja uma kufanele bese uzama ukufaka umugqa kulayini. Uma ngabe namanje ayisebenzi, khona-ke inkinga kungenzeka ingabi sebhethri.
Qiniseka ukuqala kabusha ifoni yakho ukuqinisekisa ukuthi iyasebenza noma cha.
3. Buyisela Nge-iTunes
Inketho elandelayo ukusebenzisa i-iTunes futhi ubuyisele idivayisi yakho. Ngalokhu, kuzofanela usebenzise i-PC (noma iMac) obuxhumeke nayo ngaphambilini. Uma ungakaze usebenzise i-iPhone yakho nedeskithophu, kungenzeka ukuthi kungabi khona ukwenza isipele. Njengekhasimende elishisekayo le-Apple, kungenzeka ukuthi ulisebenzise okungenani kanye. Ngakho-ke kungenzeka kube nesipele.
Akunandaba, unga landa inguqulo yakamuva ye-iTunes kwi-PC yakho . Xhuma i-iPhone yakho ngentambo bese uzama ukuqala ukuxhuma kwe-PC ngokucindezela inkinobho yamandla. Uma ngabe idivayisi ingaphenduli, ungamisa lesi sinyathelo bese uye kwesilandelayo. Kodwa-ke, uma iphendula, landela izinyathelo:
Ngemuva kokuxhuma i-iPhone ne-iTunes, khetha idivayisi yakho kuhlelo lokusebenza oluku-PC
Chofoza kunketho yokubuyisela. Inqubo yokubuyisela izosetha kahle ifoni yakho, futhi uzolahlekelwa yimininingwane yakho oyigcinile.
Kodwa-ke, ngaphambi kokusula, kuzokonga nemininingwane yakho yakamuva. Ngakho-ke ngeke ulahlekelwe noma yini onayo ngaphambi kokuthi idivayisi inqume ukucisha.
Ngemuva kokubuyisela, landela ngenqubo yokusetha ejwayelekile yedivayisi futhi uqiniseke ukuthi ubuyisela isipele sakho kusuka ku-iTunes. Ifoni yakho izokulungela ukuya.
4. Zama i-ICloud Approach
Uma lezi zinyathelo ezingenhla zingazange zithwale imiphumela emihle, ungazama inketho ye-iCloud. Kwesinye isikhathi inkinga ye-software ijule kakhulu kangangokuba inkinobho yakho ingahle ingaphenduli. Udinga indlela yokuqalisa inqubo ngaphakathi kwe-apula. Ngalokhu, uzodinga i-iCloud ukuthi isebenze kudivayisi.
Uma ukhetha ukuvikela idivayisi yakho, ungahle usebenzise iCloud kuyo. Nazi izinyathelo:
Sebenzisa noma iyiphi enye idivayisi bese uvakashela isayithi le-iCloud elisemthethweni
Ngena ngemvume nge-ID esebenzayo ku-iPhone yakho
Ungazama ukusebenzisa i-‘Thola iDivayisi yami ’noma umyalo womsindo ukubona ukuthi i-iPhone yakho iyaphendula yini.
Uma kungenjalo, qhubeka nemodi yokutakula.
Manje khetha imodi yokutakula bese ukhetha ukusula idatha
Izobuyisela ifoni yakho entsha, bese ungalandela ngenqubo yokusetha.
Kule ndlela, uzolahlekelwa noma yiliphi ifayela lokulondoloza noma isipele ebelingekho ku-iCloud. Kodwa-ke, kuyinto enhle ukubheka ukuthi ifoni yakho iqala kabusha noma cha. Uma ngabe namanje kungasebenzi, ungahle ube nenkinga engokomzimba.
5. Iya esitolo se-Apple
Njengendlela yokugcina, kuzofanele uye esitolo se-Apple bese uhlola ifoni. Kwesinye isikhathi ibhethri iyafa, noma ingxenye ethile yocingo iyapha. Bangakunikeza isisombululo senkinga.
Yini Engadala Lezi Zinkinga?
Inkinga yesoftware ingabangelwa uhlelo lokusebenza noma isibuyekezo esithile, esidala ukusilela noma ukungasebenzi kahle. Noma kunjalo, ungayixazulula ngendlela yokusetha kabusha noma yokubuyisela. Uma lokho kungasebenzi, khona-ke idivayisi kungenzeka ukuthi ithole uhlobo oluthile lokulimala. Ukulimala ngokomzimba kusuka emaconsi kanye nemithelela noma ukulimala kwamanzi kungezinye zezizathu ezihamba phambili zokulimaza ama-iPhones. Kungenzeka kube khona ukwehluleka kwengxenye kudivayisi. Noma ngabe kuyini, umphathi we-Apple esitolo uzokwazi ukukusiza ngenkinga bese ekulungisela yona.
Kuyaqondakala uma ukhathazekile. Ukulahlekelwa yifoni nedatha yakho kungaba yi-blowback enkulu. Noma kunjalo, usengavikela enye yazo noma ulondoloze okuthile.
Qiniseka ukuthi uzame zonke izindlela ezinikezwe ngaphezulu ngaphambi kokufinyelela esiphethweni. Kwesinye isikhathi, kungcono ukushiya idivayisi yakho, futhi ingahle isethwe kabusha ekugcineni. Noma kunjalo, ifoni efile ingahle ikukhuthaze ukuthi uyibuyisele ngemodeli entsha. Akudingeki ukhathazeke. Ukube ubunesipele se-iCloud noma i-iTunes kudivayisi eyedlule, ungabuyisa idatha ephelele ku-Apple iPhone entsha.
Siyethemba ukuthi umhlahlandlela ukwazile ukukusiza ekuxazululeni izingqinamba zamandla. Akucetyiswa ukuthi uzame ukuvula i-iPhone noma usebenzise izindlela ezahlukile kunalokho okushiwo ngenhla. Isitolo se-Apple kungaba yisinqumo esingcono kunokuvakashela indawo yokulungisa eseduze.
Ikesi Le-AirPod Alikhokhisi - Umhlahlandlela Wokulungisa
UJohn Madden's Net Worth Uthole Malini?